दिनहुँ २० रोटी खान्छन् तर १८ महिना देखि गएका छैनन् शौचालय, रोग देखेर चिकित्सक पनि चकित् – live 60media
एजेन्सी । एक १६ बर्षे युवक आशिषलाई अनौठो रोग देखिएको छ । यस्तो रोगवाट चिकित्सक पनि छक्क परेका छन् । उनी पछिल्लो १८ महिनादेखि शौचालय गएका छैनन् र उनी १८ देखि २० वटा सम्म दिनदिनै रोटी खान्छन् । छोरामा यस्तो समस्या देखिएपछि आमाबुवा भने चिन्तित छन् । कतै उनको छोरालाई कुनै ठूलै रोग लागेको त छैन ? भन्दै उनीहरु चिकित्सकलाई देखाउन गएका छन् ।
यो घटना भारतको मोरेना जिल्लामा भएको हो । मुरैनामा, एक गरीब परिवारको छोरा हुन् आषिश एक धेरै गम्भीर बिरामीको सामना गरिरहेका छन् । डाक्टरहरु पनि अनुसन्धानवाट कुनै रोग पत्ता नलागेका कारण अचम्म परेका छन् । मनोज चण्डिलको १६ बर्षे छोरा, आशीष चंडिल, सबिजित, मुरैना, गत १८ महिनादेखि शौचालय गएका छैनन्।
यस रोगको बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै आफन्तहरूले मुरैना भिण्ड ग्वालियरका धेरै चिकित्सकहरू देखाएका छन् । रोग पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिएको थियो, तर हालसम्म यस रोगको कुनै पहिचान गरिएको छैन।
आशिष हरेक दिन खानामा १८ देखि २० रोटि खान्छन्, तर उसको पेट र शरीरमा कुनै समस्या छैन। युवक सामान्य अवस्थामा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन् । परिवार चिन्तित छन् कि उनीहरूको छोरा कुनै ठूलो रोगबाट ग्रस्त हुनु हुँदैन।
यस सन्दर्भमा, बाल रोग विशेषज्ञहरूले यस रोगको बारेमा जान्नको लागि ठूलो अनुसन्धानको आवश्यकता औल्याएका छन् । डाक्टरहरूले अनुसन्धान बिना कुनै कुरा पनि भन्न नसकिने बताएका छन् ।
← गोहीले निलेको कुकुरलाई त्यसको मुखबाट जीवितै निकालेको भिडियो भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
१९ वर्षीया सपना रोका मगरलाई यो फेरि एक्कासी के आइलाग्यो यस्तो ? →